Latest tracks by maung maung one
ကြောရေးမှာကျော်စွာဝင်းမောင်ရဲ.ပေါင်ကိုဓါးနဲ.ထိုးပြီး မိုးသီးဇွန်ရော ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ဖူးလားလို. ခွဲမှုးသက်ထွန်းကမေးပြီးနှိပ်စက်တာကိုသက်ထွန်းဦးမေ့နေပြီလားလို.?
နိုင်အောင်နဲ. အောင်နိုင် နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး "ကိုညီညီ ခင်ဗျားအကိုက ကျနော်တို.ဆရာပါ။ခင်ဗျာညီက ကျနော်တို.သူငယ်ချင်းပါ။ခင်ဗျာထောက်လှန်းရေးမဟုတ်တာကျနော်သိတယ်။အမှန်အတိုင်းပြောပါဆိုပြီး ဂွင်ဆင်ပြီးသတ်မလို.
လုပ်တာကိုခင်ဗျားဘာပြောမလဲ?အဲဒီကိုညီကို မန္တလေးက ထောက်လှန်းရေးဗိုလ် ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်အောင်ရောအောင်နိုင်ရောစွတ်စွဲနေတာရော နိုင်အောင်ကအပြစ်ကင်းတာလား? သိုက်ထွန်းဦးကိုပြောပါ.
ကိုညီက သူရော၊ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရော၊ကိုချိုကြီးရော ။နောက်တခြားသူတွေရောထောက်လှန်းရေးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောတော့ သူရယ်၊ ရင်းမှုးအောင်ဆွေဦးရယ်၊သန်းဇော်ရယ်
ကိုထိန်လင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသားတုန်းကပုံလားဗျာ။ အခုပုံက အတော်ပြောင်းနေပြီပဲဗျာ၊ အခုပုံကိုတင်တာက ရိုးသားရာကျပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ ကိုယ်တွေ့တွေကို ရင်သပ်ရှိုက်မော ဖတ်ရင်း ဆက်ဖတ်ဖို့လဲ စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
I don't know what Ko Ng Ag and Ko Ag Ng treated to Ko Nyi Nyi.And I didn't say either Dr Ng Ag is innocent or guilty.Read and listen carefully.I remember what I said in Laiza.Don't worry about me.If it is needed,I can come and face you.